Zorin OS 15 ikozvino yavapo, yakavakirwa paUbuntu 18.04.2 LTS | Linux Vakapindwa muropa
Zorin OS 15 ikozvino yave kuwanikwa, zvichibva paUbuntu 18.04.2 LTS
pablinux | | Kugoverwa, GNU/Linux
Zorin OS 15 yakaburitswa zviri pamutemo masikati ano. Iyi vhezheni yakavakirwa paUbuntu 18.04.2 LTS, yechipiri Ubuntu vhezheni vhezheni iyo yakaburitswa muna Kubvumbi gore rapfuura. Kusiyana nekumwe kugoverwa senge Arne Exton's, vanogadzira Zorin OS vanosarudza kumisikidza sisitimu yavo paLTS vhezheni dzeUbuntu, iyo inovimbisa, kutanga, rutsigiro runogara kwenguva refu uye, chechipiri, kuti yavo yekushandisa sisitimu ine mashoma kupfuura vhezheni yaive ichangoburwa yakaburitswa saDisco Dingo.
Zorin OS 15 inoshandisa Ubuntu 18.04.2 zvinyorwa iine kernel HWE (Hardware Enablement) uye mifananidzo yakajeka yeUbuntu 18.10. Kuburitswa uku kunoenderana negore regumi rekuburitswa kweiyo yekutanga vhezheni uye inowedzera ese marudzi ekuvandudza kune kugoverwa kweLinux vane raison d'être ndeyekuti inozivikanwa kune vashandisi. switchers kuuya kubva paWindows.
Chii Chitsva muZorin OS 15
Iwe unogona kuona izere uye rakadzama runyorwa renhau dzeiyi vhezheni mune iyo ruzivo ruzivo rwekuburitswa uku, pakati payo inomira pachena:
Zorin Unganidzo, yakavakirwa paGSConnect uye KDE Unganidzo.
Dingindira nyowani, yakanyanya kuwanda minimalist uye yakapusa, iine nyowani nyowani. Inowanikwa mumatanhatu matanhatu akasiyana.
Zorin Auto theme, chinhu chitsva chinoshandura dingindira kuita rima husiku uye rinodzokera kuchiedza kana ari masikati.
Tsigiro yeFlatpak, iri mukuwedzera kune yeCanonical's Snap.
App nyowani yekuita (zvichimirira mabasa).
Tsigiro ye emojis.
Firefox inova iyo default browser.
Vatyairi veNVIDIA vanobatanidzwa muIO.
Kana iwe uri kufunga nezve kuisa iyi vhezheni (kukwazisa kune hama yangu), unogona kuikanda kubva Iyi link. Iwe uri mumwe weaimbove-vashandisi veWindows izvozvi vari kunakidzwa neLinux nekuda kweZorin OS?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Zorin OS 15 ikozvino yave kuwanikwa, zvichibva paUbuntu 18.04.2 LTS
Iyo yakanaka distro. Ndatenga iyo yekupedzisira vhezheni uye ini ndagutsikana kwazvo nehunhu hwayo. Pave nemakore angangoita mana kubvira pandakasiya Windows yeGnu Linux uye mushure mekuyedza kugoverwa kwakawanda ndakasarudza Zorin Os. Zvikonzero zvacho? Iyo yakafanana chaizvo neWindows, saka kudzidza kwayo curve yakadzika kwazvo. Uye zvakare, iyo yekupedzisira vhezheni yakakwana kwazvo uye inotsigira, iyo yanga ichikosha kwazvo kune newbie seni.
Naizvozvo, Zorin Os 12 Yekupedzisira yakave yangu yepamutemo yekushandisa system pamakomputa angu. Ini ndinoishandisa kune ese ari maviri basa uye zororo. Mhuri yangu, iyo yakanga isati yamboshandisa Gnu Linux, yanga isina dambudziko kugadzirisa, pane zvinopesana.
Zorin Os 15 Yekupedzisira yakanyanya kugadzikana kupfuura yapfuura, nekukurumidza, uye zvirongwa zvese zvakagadziridzwa mushanduro yavo yazvino.
Kune ese aya zvikonzero ini ndinokurudzira Zorin Os 15, kunyanya kune vatsva kune inoshamisa nyika yeGnu Linux.
Pindura kuna Alexandros
Yechina beta vhezheni yeApple Q yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Vashandi vepaFacebook vanovhota zvakanyanya kubvisa Zuckerberg kubva kumutungamiriri wenyika